Properties for Sale in Pazundaung - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Pazundaung
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ကွက်သစ်လမ်း ၊ 14'x50'၊BR-1၊လျှာထိုး...
Ad Number S-10170566
☃️☃️ #ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း တိုက်ခန်းကျယ် ရောင်းရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-S 397
Ad Number S-10143258
ပုဇွန်တောင် မဟာဗန္ဓုလလမ်းမပေါ်ရှိ car parkingသီးသန့်ပါသောကွန်ဒိုအရောင်း
Ad Number S-10179041
အထက်ပုဇွန်​တောင်လမ်းအနီး အသင့်​တက်​နေ ပြင်ဆင်ထားပြီး မြေညီတိုက်ခန်း (ညှိနှိုင်း)ဖြင့်...
Ad Number S-10176799
Ad Number S-10176798
ပုဇွန်တောင် #လိပ်ကန်လမ်းတွင် အခန်း(၂)ခန်းသော တတိယထပ် တိုက်ခန်း (ညှိနှိုင်း)ဖြင့်...
Ad Number S-10176795
Ad Number S-10176688
Ad Number S-10176687
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် လိပ်ကန်လမ်းရှိ အသင့်နေတိုက်ခန်း ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ရောင်းမည်။
Ad Number S-10173419
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် #လိပ်ကန်လမ်းတွင် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ အိပ်ခန်း(၂)ခန်းဖွဲ့ြ့ပီး...
Ad Number S-10172872
(ညှိနှိုင်းဈေးရှိ) အထက်ပုဇွန်​တောင်လမ်းအနီး အလွှာနိမ့် ပြင်ဆင်ထား​သော အခန်း၃ခန်းပါတဲ့...
Ad Number S-10172805